SAWIRRO+XOG: RW Kheyre oo kulan khaas ah la yeeshay Wafdi Kenya kayimi oo tagey Muqdisho, Maxayse ka wada hadleen?
MUQDISHO(P-TIMES) – Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre ayaa xalay la kulmay wafdi kasocda dawladda Kenya oo shalay tagay caasumada Soomaaliya ee Muqdisho, halkaas oo ay uga qeybgalayaan kulanka beesha caalamka iyo Soomaalida.
Kulanka oo ka dhacay xarunta safaarada Kenya ay ku leedahay xerada Xalane, ayaa looga wada hadlay arrimaha labada dhinac u dhaxeeya, gaar ahaana xariirka diblumaasiyadeed iyo mad-madowyadii u dambeeyey.
Kulankan oo aan saxaafadda loo sheegin ayaa xog iyo sawiro laga helay ay muujinayaan in ay dhinacyadu ka wada hadleen arrimaha labada dal u dhaxeeya, lamana garanayo in lasoo qaaday arrimaha ay ku muransan yihiin labada dal ee xagga Badda.
Sida uu bartiisa Twitterka ku baahay Ababu Namwambe oo ah Kaaliyaha Wasiirka Arrimaha dibadda Kenya oo sheegay in isaga iyo Ra’iisul Wasaaraha ka wada hadleen arrimo dan u ah labada dal ee Kenya iyo Somalia.
Warar hoose ayaa sheegaya in ay xubnahan qaarkood yihiin guddiga ay magacaabayso dawladda Kenya ee kuwajahan la xaajoodka Soomaaliya si horey loogu dhaqaajiyo xariirka labada dal u dhaxeeya.
Madaxweynayaasha Soomaaliya & Kenya, waxay dhawaan ku heshiiyeen dhismaha guddi wadajir ah oo kasocda labada dal, kaas oo muhiimadooda ay ka wada hadlayaan tahay sidii iskaashi wanaagsan loo abuuri lahaa.
Ra’iisulwasaare Kheyre oo haysta dhalashada dalka Norway ayaa dalkaas uu qeyb ka yahay qorshaha ay Kenya ku doonayso in ay ku boobto badda Soomaaliyeed, dad badana ayaana shaki galinaya suuragalnimada in Mr, kheyre uu ku qanacsan yahay qorshaha Norwayd.